जमिनमुनिको पानी धेरै तान्दा के हुनसक्छ त्यसको परिणाम ? यस्तो छ उदाहरण - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एजेन्सी । जमिनमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तान्यो र भूमिगत पानी ‘रिचार्ज’ हुन पाएन भने त्यसको परिणाम के हुनसक्छ ? यसको पछिल्लो उदाहरण इरानको राजधानी तेहरानमा देख्न सकिन्छ। पश्चिम एसियाकै सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको यो सहर केही समययता निरन्तर भासिँदै गएको छ। भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले स्याटलाइट तस्बिर विश्लेषण गरी तेहरानका केही भाग वर्षको २५ सेन्टिमिटरका दरले भासिँदै गएको बताएका छन्।
करिब १ करोड ३० लाख जनसंख्या रहेको तेहरानमा खानेपानी तथा सिँचाइ निम्ति भूमिगत पानीको व्यापक प्रयोग हुन्छ। जमिनमुनिबाट अत्यधिक पानी खिच्दा भूमिगत स्रोत रित्तिन गई भासिन थालेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अत्यधिक कंक्रिट संरचना निर्माणले यो समस्या अझ बढाएको छ। कंक्रिट संरचनाले जमिनमुनि पानी ‘रिचार्ज’ हुने ठाउँ दिँदैन।
त्यस्तै, सहरको दक्षिणपूर्वमा पर्ने कृषिजन्य क्षेत्र पनि यही दरमा भासिँदैछ। यो पनि बढी भूमिगत पानी प्रयोग हुने ठाउँमा पर्छ। यसले के देखाउँछ भने, जमिन भासिनु र भूमिगत पानीको स्रोत बढी चलाउनुमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। जुन ठाउँमा जमिनमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तानिन्छ, त्यहाँको जमिन सुख्खा हुँदै जान्छ। जमिन भासिने र खाल्डो पर्ने समस्या बढी देखिन्छ। तेहरानका यी दुई क्षेत्रमा पनि ठाउँ–ठाउँ जमिन भासिएर खाल्डो परेका छन्।
इरानको राजधानी तेहरानमा जमिनमा परेको खाल्डो। उता, तेहरानको दक्षिणपश्चिममा भासिने क्रम वार्षिक ५ सेन्टिमिटर छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको ठाउँ हो। ‘तेहरानमा जमिन भासिने दर संसारकै सबभन्दा उच्चमध्ये पर्छ,’ स्पेनको एलिकान्ट विश्वविद्यालयका इञ्जिनियर रोबर्टो टोमसले भनेका छन्।